मृत्युले जिस्काइरहेछ, उपचारमा अटेरी! – Health Post Nepal
२०७७ भदौ १५ गते १४:०१
डाक्टर! बिरामी घर जाने रे?
इमर्जेन्सिबाट बिहानै फोन आउँछ।
आँखाले भर्खर आराम गर्ने पाउने मात्रै के पाएका थिए। त्यो कल आइहाल्यो। मिठा सपना त ड्युटिमा कहिल्यै देख्न पाइने कुरै भएन।
पेशाको कर्म नै त्यस्तो। रातिको २ बजे भर्ना गरेको बिरामी बिहान ६ नबज्दै घर जान्छु भन्छ। मलाई अवस्था अस्वभाविक लाग्यो। इमर्जेन्सी जान्छु। जाँदा लिफ्ट प्रयोग गरे। ताकी एकै छिन भएपनि आँखालाई आराम दिन पाइयोस्।
ज्वरो तथा श्वास फेर्न गाह्रो हुनुका साथै र खोकी लागेर अस्पताल भर्ना भएकी ती बिरामीको अवस्थाले कोरोना शंका गर्नु कुनै गल्ती थिएन। शरीरमा अक्सिजन नपुगेर मेसिनले जम्मा ७० प्रतिशत देखाइरहेको थियो।
उनको छातीको एक्स रे हेर्दा दुबै फोक्सोमा न्युमोनियाको लक्षण देख्न सकिन्थ्यो। हेर्दा कोरोनाको बिरामीभन्दा फरक थिएन लक्षण। उनलाई आइसियु स्थानान्तरण गर्ने सोच बनाएको थिएँ। भर्ना भएको ४ घण्टा नपुग्दै घर लिएर जान खोजेको मलाई चित्त बुझेको थिएन।
बिरामीकी श्रीमती मुर्मुरिँदै थिइन्। सिस्टरहरूसँग हाम्रो रेखदेख भएन भन्दै कराउँदै थिइन्। तर, केही क्षण अगाडी मात्रै प्रेसरलगायत स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो। उनको मनको भडासको झटारो निस्केको सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो।
बिरामीको रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम भएर समस्या भइरहेको थियो। हालको कोरोना महामारीमा मास्क लगाउन गाह्रो मान्नेहरूलाई ती विरामीलाई देखाएर सम्झाउने झोक चलेको थियो। यो विषम परिस्थितित हो। यस्तो बेला हामी सबैले उच्च सावधानी अपनाउनुपर्छ। हामी सबैलाई यो कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि आनाकानी गरिरहेका हुन्छौं।
त्यो कोरोना संक्रमण नभएर निमोनिया पनि हुन सक्थ्यो। उनलाई ठिक हुन सक्ने सम्भावना पनि कायमै थियो। तर उनकी श्रीमतीले अस्पतालमा बस्दै नबस्ने ढिपी गरिन्। जति सम्झाउँदा पनि मानिनन्।
उनको सामाजिक र आर्थिक सकस पोखिएको महशुस गरेँ। हातमा सानो बेरिएको पैसाको कुटुरो, सानो-सानो कुरामा झर्किने बानीले उनीभित्रको उदासिपनलाई झल्काइरहेको थियो। उनलाई उपचार गर्न मनै नभएको होकी कुनै अरु कारणले नै त्यस्तो गर्न खोजेकी हुन्। त्यो भने बुझ्न सकिन।
कारण बुझ्न खोजिरहेको थिएँ। तर, पुष्ट कारण फेला पारिन। बल्लतल्ल खर्चले नधान्ने भएर घर फर्किने कुरो गरिन्। एम्बुलेन्सको १२ हजार भाडा तिरेर आएको बिरामीले थप १० हजार जोहो नगरी काठमाडौंसम्म आएको पत्याउन मनले मानेन। आँकलन गर्नु सिवाय कुनै विकल्प थिएन। विकल्प भएकाहरूको नितिले यस्तो बिरामी समेट्न सकेन। हेल्थ इन्स्योरेन्सले केही गर्ला भन्ने आश जिवित नै छ मेरो।
दिनभर रक्सीमात्रै पिउने श्रीमानबाट आजित भएकि पो थिइन् कि? उपचार गर्ने बेलाको खर्चले आत्तिएर हो कि? जे भए पनि उनी दृढ थिइन्। रक्सीले उनको श्रीमानको ज्यान त गलाएको थियो। उनको आफ्नो जीवन पनि कतै गल्दै गएको पो थियो कि? म अनुमान मात्रै लगाउन सक्थेँ।
एकजनाको खराब बानीले सम्पूर्ण परिवारलाई नै धनदेखि मनसम्मा क्षती पु-याइरहेको हुन्छ। खराब बानी थाहा हुँदाहुँदै रोगको खाडलमा सबैलाई डो-याउनु गैरजिम्मेवार पन हो।
ती पुरुष पक्कै पनि गैरजिम्मेवार थिए। श्रीमतीका कोमल हातले गिट्टी कुटेर आर्जेको पसिनाको कमाई तिनले रक्मीमा रित्याउथे। यो श्रीमतीका लागि कदापी पन परेको कुरो थिएन। र, क्षमा योग्य पनि होइन।
समाजले श्रीमानलाई बचाउन केही गरिन भन्लान भनेर पनि त उनलाई काठमाडौं ल्याइएको हुन सक्छ। समाजमा फुर्सदिला कुरौटैको जमात ठूलै हु्न्छ। ठूलो ठाउँ पुगेर फर्किएपछि डाक्टरले अब बाँच्दैन भनेर फर्केको भनेपछि सहानुभूति पनि हुने भयो। मेरो मनमा अनेकन तर्कनाहरूले डेरा गरि जमाइरहेको थियो।
कारण जेसुकै होस्। तर, कोरोनासँग मिल्दो लक्षण भएकाले परीक्षण नगरी घर पठाउन उचित लागेन। त्यसैले टेस्ट गर्ने प्रबन्ध मिलाउन द्रूत गतिमा प्रक्रिया चाल्यौं। तर, ती आइमाइको ढिपी मेरो गतिभन्दा द्रूत र अटेरी थियो। त्यसैले स्वाब परीक्षण आफै निकाल्न कर लाग्यो।
स्वाब निकाल्न गएको बेला बिरामीले ख्वाक्क खोक्दा कोरोनाको भाइरसजति सबै आफैतिर आएको जस्तो लाग्यो। आफूलाई सुरक्षित गर्ने पिपिई लगाएर गए पनि डर भने लागि नै रहेको थियो।
स्वाब संकलन गरे पनि रिपोर्ट नआउँदासम्म बिरामीलाई पठाउन नमिल्ने हो। नपठाउने प्रयास पनि गरेँ। तर, मेरो केही सीप लागेन। उनले ब्यक्तिगत अधिकारका कुराले धम्क्याउन पनि थालिन्। स्वतन्त्रताको प्रयोग अलि बलियो नै छ। समाजदेखि न्यायालयसम्म।
आफ्नै इच्छाले बिरामी लगेको कागजमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो श्रीमान् लिएर गइन्। त्यो कागजमा हस्ताक्षर थिएन। त्यो एउटा जिवनलाई आर्यघाट पु-याउन सबल हस्ताक्षर थियो। मेरो अनुभवले अनुमान गरेसम्म त्यो अवस्थाको बिरामीको नियती सिधै आर्यघाट हो भन्ने कुरामा दुविधा थिएन।
त्यो बिरामीको नियती के भयो, त्यो मैले देख्न परेन। चिन्ता त केवल उसको रिपोर्टको भयो । रिपोर्ट आउन दुईदिन लाग्छ। रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण देखिए फसाद नै पर्ने थियो। धेरै जनालाई कोरोना सरिसकेको हुन्थ्यो।
अर्को दिन थाहा भयो कि त्यो बिरामीको रिपोर्ट नेगेटिभ छ भनेर। बल्ल चयनको श्वास फेर्न सकेको अनुभव भयो। कोरोना संक्रमित भएको भए पनि उनको निम्ति खास औषधीमुलो अझै बनिसकेको छैन। न त ट्रायलको औषधी न त प्रमाणित औषधी नै। बनेका औषधी धान्न नसकिने मूल्यमा छन् ।
उनको निम्ति केवल डाक्टर र नर्सिङको हेरचाह मात्रै हुने थियो। चालू सबै भेन्टिलेटरमा कोहि न कोहि बिरामी जुधिरहेका थिए। कोहि एकजनाको अवसान अथवा कसैले रोगलाई नजितेसम्म उनको निम्ति भेन्टिलेटर पनि उपलब्ध थिएन। के उनको नियति मृत्युवरण नै होला त?